Coronavirus: Wiil Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da’da yaraa ee UK ugu dhintay Covid-19 – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Coronavirus: Wiil Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da’da yaraa ee UK ugu dhintay Covid-19
Allhadaaftimo April 1, 2020 Uncategorized
Wiil 13 jir ah oo Soomaali ah, oo laga helay coronavirus ayaa geeriyooday, sida ay sheegeen maamulka isbitaal ku yaalla magaalada London.
Ismaaciil Maxamed Cabdulwahab, oo qoyskiisa ay daggan yihiin xaafadda Brixton ee koonfurta London, ayaa galinkii hore ee maalintii Isniinta ku geeriyooday isbitaalka King’s College.
Waxaa la aaminsan yahay inuu noqday qofkii ugu da’da yaraa ee coronavirus ugu dhintay gudaha UK.
Afhayeen u hadlay isbitaalka ayaa sheegay in dhimashada wiilkan yar loo sababeeyay saameynta xanuunka corona, laakiin wax faah-faahin dheeri ah ma uusan bixinin.
In ka badan 1,790 qof ayaa UK ugu geeriyootay cudurkan loo bixiyay Covid-19.
Tirakoobkii ugu dambeeyay ayaa lagu sheegay in hal maalin gudaheed ay dhimashada ku korortay 381 qof, taasoo ahayd tii ugu sarreysay ilaa hadda.
Qoyska Ismaaciil oo bayaan ay so saareen uu shaaciyay qof saaxiib la ah ayaa sheegay “inay musiibo weyn ku tahay” geeridiisa.
Waxay intaas ku dareen inuusan horay u qabin cudurro muuqday oo dhibaato ku ahaa caafimaadkiisa, wixii ka horreeyay maalintii Jimcada oo laga helay Covid-19
Hal maalin ka hor xilligaas ayaa isbitaalka lasii dhigay, kaddib markii ay xaaladdiisa caafimaad isbaddashay.
“0.3% oo ka mid ah dadka ay calaamadaha cudurkan ka muuqdaan ayaa u baahan in isbitaal la dhigo, 0.006% oo ka mid ah dadkaasna way u dhintaan – marka si kale loo dhigana 2 ka mid ah 30,000 oo qof oo uu cudurkan ku dhaco iyagoo da’da wiilkaas ah kama badbaadayaan,” ayuu yiri qofka saaxiibka la ah qoyska.
“Laakiin way dhacdaa, sida haddaba kiiskan murugada badan ka muuqata.”
Qoyska Ismaaciil ayaa sheegay in wiilkooda ay isbitaalka geeyeen markii ay ku arkeen calaamadaha, xilligaasoo neefsashada ay dhibeysay.
“Xaaladdiisu way sii xumaaneysay ilaa uu koomo ka galay, ugu dambeyntiina nasiib darro wuxuu geeriyooday subaxnimadii Isniinta,” ayey dhaheen.
Falanqeyn: Maxay tahay khatarta ka dhanka ah dadka da’da yar?
Waxaa diyaariyay Richard Warry, Kaaliyaha tifaftiraha qeybta caafimaadka ee BBC News
Cilmibaaris la sameeyay ayaa muujisay in carruurta iyo dhalinyarada dhowr iyo toban jirka ah ay aad u yartahay inay u dhintaan Covid-19, marka loo eego dadka waaweyn.
Calaamadaha cudurka ayaa si khafiifka uga soo muuqda carruurta, iyagoo u eg sida hargabka caadiga ah.
Seynisyahannadu wali ma aysan kala hubsanin sababta ay arrintan u dhacday. Waxaa suurtagal ah in difaaca jirka ee carruurta uu yahay mid kan dadka waaweyn uga awood badan la dagaallanka Fayraska.
Laakiin tani micnaheeda ma aha in carruurta qaba xanuunnada kale aysan waxba ku noqoneynin saameynta coronavirus.
Dr Nathalie MacDermott, oo ah macallin cilmiga caafimaadka ka dhiga King’s College London, ayaa sheegtay in dhimashada Ismaaciil “ay muujineyso muhiimadda ay noo leedahay inaan qaadno tallaabooyinka loo baahan yahay si loo yareeyo faafitaanka cudurkan ee gudaha UK iyo guud ahaan caalamka”.
Waxay intaas ku dartay: “Waa lagama maarmaan in la sameeyo cilmibaaris lagu ogaanayo sababta ay cudurka ugu dhintaan dad ka baxsan kuwa la filan karo”.
Previous Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur galbeed oo loo doortay Dr. Cali Fiqi
Next Wareysi Somalida Udhimatay Caabuqa Halis Badan Ma Dawooyin Baa Lagu Tijaabiyay ?
Wasiirkii Hore Ee Amniga Puntland Oo Turkiga Ku Geeriyooday November 24, 2020
CC Shakuur oo madaxda DG iyo Rooble ka dalbaday inay dhex-dhaxaad ka noqdaan doorashada November 24, 2020
Archives Select Month November 2020 (89) October 2020 (86) September 2020 (138) August 2020 (124) July 2020 (136) June 2020 (123) May 2020 (83) April 2020 (104) March 2020 (177) February 2020 (160) January 2020 (163) December 2019 (165) November 2019 (168) October 2019 (138) September 2019 (152) August 2019 (166) July 2019 (166) June 2019 (162) May 2019 (158) April 2019 (114) March 2019 (128) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)